प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामनासहित पशुपतिमा पूजा
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामनासहित पशुपतिनाथमा विशेष पूजापाठ गरिएको छ। पशुपति विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामनासहित पहिलो प्रहरको पूजापाठ गराएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू कोषको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै विशेष पूजा गरेको हुँ,’ कोषाध्यक्ष थापाले भने। मिर्गौला प्रत्यारोपणको सफलतासहित शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासहित बिहान भएको विशेष पूजापाठ र रुद्राभिषेकमा डा. थापासहित अन्य शुभेच्छुकसहितको सहभागिता रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासहित सवा लाख दीप प्रज्ज्वलनसमेत गरिएको थियो। बुधबार विहान ९:३० बजे देखि १५ मिनेट विशेष पूजा गरिएको उनले जानकारी दिए। पशुपति मन्दिरका पूजारी भट्टले नै पूजा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सबै स्वास्थ्य रिपोर्ट सामान्य आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। उनको आज दोस्रो पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण हुन लागेको हो। उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न मन्त्री, पार्टी नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरु अस्पताल परिसरमा पुगेका छन्।
Tagsकेपी ओली स्वास्थ्य उपचार
१ हजार ९ सय ५४ कोरोना संक्रमित थपिए : कुन जिल्लामा कति ?
नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालको स्वाव संकलनसम्बन्धी कार्यविधि
बागमती प्रदेश प्रमुख प्रसाईलाई कोरोना पोजेटिभ
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गाेपाल किराँतीले दिए राजीनामा
‘रअ’ प्रमुख भेटबारे डा. बाबुरामको जवाफः कागको पछि नदौडौं
कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रमा ‘हेल्थ डेस्क’ अनिवार्य स्थापना
नेकपामा फेरि विवादः केन्द्रीय कमिटी बैठक सारिएकोप्रति प्रचण्डको असन्तुष्टी
नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक सर्‍यो
चौरसियाको हत्यारालाई प्रधानमन्त्रीले जोगाएः मातृका यादव
मनोज गजुरेललाई कोरोना संक्रमण
आज पनि मान्यजनबाट दशैंको टीका र जमरा लगाइँदै
लक्षण नभएका कोरोना सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मीलाई निरन्तर काम गरिरहन अनुरोध
टर्कीका राष्ट्रपतिद्वारा फ्रान्समा बनेको सामान नकिन्न आव्हान
रुपन्देहीमा थप दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु
पाल्पामा कोरोना संक्रमित थप दुईको मृत्यु
गुजराती फिल्मका सुपरस्टार नरेशको निधन